सिन्धुलीमा कोरोनाबाट पुरुषको मृत्यु, शव व्यवस्थापनमा स्थानीयको अवरोध – Bisal Chautari
- २० कार्तिक २०७७, बिहीबार ०९:३८ मा प्रकाशित
सिन्धुली,२०७७ कार्तिक २० बिहिवार । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणबाट सिन्धुलीमा थप एक जनाको मृत्यु भएको छ । बिहिबार विहान कमलामाई नगरपालिका ५ का ४८ वर्षिय पुरुषको सिन्धुली अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।
ती पुरुषलाई कार्तिक १५ गते बेहोस भएपछि उपचारका लागि धुलिखेल लगिएको थियो मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापनमा स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । धुलिखेलमा उपचार सम्भव नभएपछि काठमान्डौ मेडिकल कलेज लगिएको थियो । उनमा कार्तिक १६ गते कोभिड १९ पोजेटिभ देखिएको थियो ।
आईसियु वा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्न परिवारले नसक्ने भएपछि उनलाई परिवारले सिन्धुली फिर्ता ल्याईएको थियो । बुधबार राती सिन्धुली अस्पतालमा ल्याई भर्ना गरिएका ती पुरुषको विहिबार विहान सवा ३ बजे मृत्यु भएको सिन्धुली अस्पतालका कोभिड १९ फोकल पर्सन डा. प्रसन्नजंग राजभण्डारीले विज्ञप्ती प्रकाशित गरि जनाएका छन् ।
शव व्यवस्थापनमा अवरोध
कोरोना भाईरसका कारण मृत्यु भएका ती पुरुषको शव व्यवस्थापनमा भने स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा नेपाली सेनालाई स्थानीयले अवरोध गरेका हुन् ।
शव व्यवस्थापनका लागि शव गडौली घाटमा लगेर फिर्ता गरिएको छ । सेनाले गडौली घाटमा खाल्डो खनि शव व्यवस्थापन गर्न लाग्दा स्थानीयले अवरोध गरेका हुन् । नेपाली सेनाको शव व्यवस्थापनमा परम्परागत घाटमा लगिएको भए पनि स्थानीयले अवरोध गरेका थिए ।
स्थानीयको अवरोधपछि शव फिर्ता गरी कमलामाई नगरपालिका वडा नं. ५ को ढाक्रेवास व्यवस्थापनका लागि लगिएको छ । घाटमा नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरीको टोली परिचालन गरिएको भए पनि स्थानीयको चर्को विरोध पछि मृतकको शवलाई फर्काएर ढाक्रेबास खोलामा व्यवस्थापन गरिएको हो ।
‘यसअघि जिल्लामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकी कमलामाई नगरपालिका ६ पानीट्यांकीकी ८४ वर्षीया महिलाको शव कमलामाई नगरपालिका ७ स्थित बुकाखोलामा व्यवस्थापन गरिएको थियो । बुका खोलामा शव व्यवस्थापन गरिए पनि विरोध आएपछि जिल्लाको शव दाह स्थल गडौलीमा शव व्यवस्थापन गर्न खोजिएको थियो ।
ठाउँ एकीन नहुँदा समस्या
तथापी हालसम्म पनि कहाँ व्यवस्थापन गर्ने र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा अन्यौलता नै रहेको छ । जसका कारण मृतकको शव व्यवस्थापनमा समस्या आएको नेपाल रेडक्रस सोसाईटी सिन्धुलीका सभापति अशोक श्रेष्ठले बताए । शव व्यवस्थापनमा समस्या आएपछि तत्काल सर्बदलिय संयन्त्रको बैठक बसेर दीर्घकालीन रुपमा शव व्यवस्थापनका लागि स्थान तोकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी योगेन्द्र प्रसाद पाण्डेले बताए ।